Barlamaanka oo la horkeenay heshiiskii wasaarada Gaadiidka Cirka ay la gashey Shirkada Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga – idalenews.com
Barlamaanka oo la horkeenay heshiiskii wasaarada Gaadiidka Cirka ay la gashey Shirkada Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga
Baarlamaanka Soomaaliya, waxaa maanta hortagay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu uga warbixiyay heshiiska dowladda Somalia ay la gashay shirkadda Vavori ee laga lee yahay dalka Turkiga.
Wasiirka ayaa mudanayasha baarlamaanka u faah-faahiyay sababta keentay in shaqada laga wareejiyo shirkadii SKA, wuxuuna sheegay in shirkadaas ay ka soo bixi weysay howshii laga rabay, sidaas darteedna ay keentay in lagu wareejiyo shirkadda Turkige ee Favori.
Cabdulaahi Cilmooge Xirsi ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay u hamuun qabto shirkaddan Vavori isagoona intaas ku daray in howsha laga rabo ay ka soo bixi doonto muddada 15-ka.
“Shirkaddan haddii ay muddada aan kula ballannay ay ku sameen weyso shaqada waa laga ceyrinayaa tu kale ayaan u dhiibenyaa” ayuu yiri.
Wasiirka ayaa ku soo bandhigay goobta Khalfoof ama Jaantuus muujinaya sida loo dhisi doono garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho.
Fadhigga maanta baarlamaanka oo uu shir guddoominaayay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa la sheegay in markale baarlamaanka uu hor imaan doono wasiirka isla markaana laga doonayo in heshiiska dowladda iyo shirkadda Vavori lagu soo qoro af Soomaali ah.
Madaxweynaha Uganda oo dalbaday in la kordhiyo Ciidamadda Nabad galyada u joogo Somalia.
Hogaamiyaha Maamulka Jubba Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Fartaag oo isku haya dhameystirka Maamulka Jubba